Tag: ungwaru hwemagariro | Martech Zone
Tag: huchenjeri hwemagariro
Mugovera, Nyamavhuvhu 29, 2015 Svondo, Nyamavhuvhu 30, 2015 Douglas Karr
Mabhizinesi ari kuramba achiedza kutora dhata pane tarisiro uye vatengi kune vese vanowana nekukwezva zvinotungamira, uyezve kuchengeta uye kusimudzira vatengi vavanowana. Iko kune toni yetekinoroji kunze uko kuyedza kutora iyi data. Zvimwe zvezvinyorwa zvacho hazvisi zvechokwadi uye zvimwe hazvichashandi. Zvakashata kuti pakanga pasina sosi yeruzivo iyo yairamba ichivandudzwa nemazvo uye kazhinji nevanhu. Pane! Vanhu vanoramba vachienda uye vachidzokorora
Chishanu, January 30, 2015 Chitatu, Kukadzi 4, 2015 Douglas Karr
Kupotsa kubva kuzhinji kwekutsvaga kwandinoona online ndiye mamiriro ezviverengero zvakapihwa. Ini ndinoona kuti iwo manhamba ari kutsausa (kazhinji zvine chinangwa) uye zvinoenderana nemahwindo emamiriro akakodzera kana zviitiko zvisina kujairika. Zvisinei, ivo vakagoverwa chero zvakadaro. Nyaya iripo, ndine chivimbo chekuti chero svikiro rinokuudza kuti vane yakanak kudzoka pane kudyara. Hazvigoneke kuti munhu wese ave akanakisa… uye zvakanyanya kukosha, zvakanakisa kuzviisa pasi.
newBrandAnalytics inotangisa Pulse, Chaiyo-Nguva Yemagariro Njere
China, June 26, 2014 China, June 26, 2014 Douglas Karr
newBrandAnalytics (nBA) yakaparura Pulse, gore-rakavakirwa chikuva chinobatsira vatengi vakaita saMcDonald's, David Bridal, DICK's Sporting Goods uye Subway kuwana chaiyo-nguva kuoneka mune dzinochinja misoro uye hurukuro dzinokanganisa yavo brand uye chigadzirwa kuona. Pulse inosanganisira yekuteerera pasoftware inounganidza zvitaurwa zvega uye hurukuro, inopa data rekufambisa uye inobvumidza iyo mhando kuti iite mune chaiyo-nguva. Pulse ine zvinhu zvitatu zvinojekesa: Yekutanga kuona uye yambiro system - Pulse inongotumira yambiro yekuziva
Chishanu, April 12, 2013 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
newBrandAnalytics inopa magadzirirwo ehungwaru munharaunda yeresitorendi, kugamuchira vaeni, hurumende uye maindasitiri ekutengesa. Ivo vanojekesa uye vanoongorora reams yemagariro midhiya mhinduro uye voishandurira mumashandiro ekuona munzvimbo dzenharaunda, dunhu uye marandi emazinga evatengi vavo. Heino pfupiso yekuti NBA inoshandiswa sei muIresitorendi Indasitiri: nBA Insight inounganidza nekugadzirisa huwandu hwakawanda hweasina kurongeka enhau mitezo nezve rako bhizinesi padanho remunharaunda, renharaunda, uye brand, kuti iwe ugone